Maxaa hoos u dhigay heerka waxbarasho ee dugsiyada dawlada? – Guban Media
Arday fasal wax ku baranaysa (Photo/file)
September 16, 2019 September 17, 2019 Ali Mohamed 412 Views 0 Comments
1; Markii ay talada la wareegtay xukuumadda kulmiye 2010 kii, waxa ay ku dhawaaqday in waxbarashada aasaasiga ahi ay tahay lacag la’aan(FPE), taasi waxa ay keentay lacagtii yarayd ee waalidku siin jiray dugsiga meesha ka baxdo taa beddelkeedana xukuumaddu la warregto. Maba xuma, balse waxa lacagta wasaaraddu ka yaraatay tii uu macalinku waalidka ka heli jiray. Waxa sidoo kale la waayey lacagihii dugsigu ku bixin jiray biyaha, nadaafadda iyo dyactirka intaba. Lacagtaas oo maamulku ka dhex samayn jiray dakhliga guud ee dugsiga. Ma jirin kharash dheeri ah oo wasaaraddu ugu talo gashay dugsiyaas.
2; Waxaa hoos u dhac weyni ku yimi deegaankii dugsiyada. Waxa joogsaday dayactirkii ay wasaaradu ku samayn jirtay dugsiyada. Iyadoo dakhligii lagu bixin jiray loo adeegsaday dano gaar ah.
3; Waxa hoos u dhacay isla xisaabtankii maamulka iyo barayaasha ee dugsiga dhexdiisa. Maamulku waxa uu gacanta ku hayey dhaqaalaha la siiyo baraha waanu la xisaabtami karayey, balse markii taasi meesha ka baxday waxa meesha ka baxay la xisaabtankii maamulku baraha la xisaabtamayey.
4;Kormeerka wasaaradda waxbarashada oo noqday mid fadhiid ah. Waaxda kormeerka dugsiyada waa tii kormeeri lahayd shaqada iyo hanaanka shaqaalaha. Xubinta kormeerka ah eek u qoran dugsiga waxa la arki jiray maalmaha ay barayaashu mushaharka qaybsanayaan, wakhtigii dugsigu lacagta qaadi jiray taas oo macalin kastaa garooc yar u tuuri jiray kormeeraha, isaguna war fiican oo malaawaal ah ka gudbin jiray dugsiga. Maantase, waaba yartahay inta xubin kormeeri dugsi timaaddaa.
5; Hawlwadeenada Wasaaradda waxbarashada oo halkii ay la tartami lahaayeen dugsiyada gaarka ah ku mashquulay cambaaraynta iyo dhaleecaynta dugsiyada gaarka ah iyaga oo hadh iyo habeen TV ka hadlaya kuna mashquulsan dhaliil iyo cambaarayn cid kale halkii qorshe hawleed la iman lahaayeen.
Ma jirto daraasad ama warbixin waxbarasho oo khuseeya waxbarashada Dalka oo wasaaraddu la wadaagto bulshada. Taasi waxa ay keentay in aan marnaba baadhitaan buuxa lagu samayn hoos u dhaca iyo waxa keenay toona.
Dugsiyada qaar ayaa waxa ay ku dhawyihiin in ay xidhmaan qorsha xuma awgeed waxa ka mid ah Dugsiga Sare ee Maxamed Aadan Sheef iyo kuwa kale oo la mid ah.
Barayaal badan ayaa u digo rogtay dugsiyada gaarka sababo dhaqaale awgeed.
Waxa ay ayaan darrada ugu weyni tahay, in aanay jirin sannad ay wasaaradda Waxbarashada iyo Saynisku ka dhaqaale iyo itaal roontahay maanta. Lama odhan karo dhaqaale yaraan ayaa sal u ah mushkiladda.
Agasimayaasha iyo agaasime waaxeedyada oo u badan niman dhalin yaro ah, waa kuwo la odhan karo xalkoodu waa mid ku salaysan caadifad iyo khibrad yari. Waa niman uu koobanyahay wakhtiga ay u huraan hawl maalmeedkooda shaqo, balse taa beddelkeeda wakhti badan ku bixiya fadhiga majlisyo ay isugu yimaadaan kuna gorfeeyaan arimaha loo igmaday iyagoo soo saara go’aamo mirqaan lagu bineeyey oon meel mar noqon Karin.
← Aniis Essa:The historical background of Somaliland
Guddoomiyaha Guurtida oo ku taliyey in wax laga qabto colaada Ceel-Afweyn →